पहिलो पटक रक्सौलमा… [भाग-२] #FirstTimeAtRaxual
Aakar Anil June 20, 2011
“आप को आइसी, साट्ना हे तो, आगे साट्लो” सिर्सिया खोला को पुल तरेर दक्षिणतिर लागेपछि टाङ्गावाला ले भन्यो । टाँगा मा एक्लै छु, रक्सौल बजार छिरिसकेको छु, पैसा साट्ने बहानामा यसैले पो पैसो लुट्ने हो कि भन्ने शंका ले एक्कासी मन मा वास गर्यो । खल्ति मा ८-९ सय नेपाली रुपैयाँ र केही भारतिय रुपैयाँ थियो । भै’गो नेपाली पैसो पनि संगै लान्छु भन्ने सोचेर, ‘हमारे पास आइसी हे’ मैले भनेँ । त्यही नि टाङ्गावाला ले दोहोर्यायो, ‘फिर आपको आगे साट्ने का जगा नहिँ मिलेगा’ । जति जति म सँगै टाङ्गा रक्सौल बजार को धुलोभित्र हराउन खोज्दै थियो, त्यति त्यति सबै कुरा विरानो लाग्दै आइरहेको थियो । मन ओइलाएको थियो, घरमा फोन गर्ने विचार गरेँ तर मोवाइल मा सिग्नल थिएन ।
रेल को लिक कटे पछि भने अकस्मात टाङ्गावालालाई टाङ्गा रोक्न इशारा गरेँ । खल्ति छामछाम छुमछुम पारेजस्तो गरि पर्स बाट यस्तै ८-९ सय निकालेँ । बाटो को वायाँ छेउमा लस्करै भारु साट्नेहरु बसेका थिए, एक-एकवटा टेबल राखेर । उनीहरु भारत तिर जाँदै गरेकालाई आइसी साट्लो भन्थे अनि नेपाल तिर आउँदै गरेकालाई एनसी साट्लो भन्थे । मैले पनि टाङ्गा रोक्ने ईशारा गरेर भारु साटेँ । त्यसले मज्जाले भारु साटिदिएपछि घरमा हिँड्ने बेला ममी ले भनेको कुरा सम्झिँए । ममी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाटो खर्च अरु १ हजार लान्छौ त ? मैले सोधेको थिएँ, भारु हो ? ममीले भारु हैन, नेपाली नै हो, बोर्डर तिर साट्नु भन्नु भो । आफू रक्सौल कहिले नगएकोले बाटो मा त्यसरी पैसो साट्न बस्छन् भन्ने हेक्का थिएन, त्यही भएर ‘ह्या, भयो नलाने, भन्या ठाउँ सम्म पुग्ने भाडा छ मसँग’ भनेको थिँए । तर पछि भने, ममीले दिनखोज्नु भएको पैसो पनि लिनुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो । त्यो पैसा नि लिएको भए, बाटा खर्च को लागि अझ धेरै आडभरोसा हुन्थ्यो भन्ने कुरा सोच्दैरहेँ । मैले पैसो नलिएर गल्ति गरे झैँ लाग्यो, आखिर यति सजिलै साट्न मिल्ने रहेछ ।
रक्सौल बजार मा मान्छे को भिड त थियो नै, त्यसमाथी गाडिहरुले पनि पुरै बाटो जाम गरेका थिए । रक्सौलमा भएका बैंकहरुका एटिएम बाट पैसा निकाल्न मान्छेहरु को लामो लाम थियो । एटिएम बाट पैसा निकाल्न त्यति लामो लाम लागेको, पहिलो पटक देख्दै थिँए । बाटो को दायाँ तर्फ भने, आँप र लिच्ची बेच्नेहरु को चहलपहल थियो । ‘बाहिर आँप किनेर नखानु, औषधी हालेर पकाको हुन्छ, स्वास्थ्य मा असर गर्छ’ घरबाट हिँड्ने बेला बुवा ममी ले बारम्बार भनिरहनु भएको थियो । यसै कारण पनि आँपमा खासै मन बसेन तर मान्छेहरुले छानी छानी ठूला ठूला, पातसँगै का राता राता लिच्ची किनेको चाँही टाङ्गावाट हेरिरहेँ ।
नहरको पुल कटेर टाङ्गा नहर को डिलै डिल पश्चिमतिर लाग्यो । सूर्यदेव टाङ्गाको टाउकामाथि थिए, गर्मी थियो, अनुहार र शरीर भरि पसिना नै पसिना थियो । टाङ्गावाला ले एउटा घर अगाडि पुर्याएर टाङ्गा रोक्यो, न्यु वसपार्क आ-गया भन्यो । हैन के भन्छ यो टाङ्गावाला भन्या जस्तो लाग्यो । उसले उत्रो, भनेपछि झोला टाङ्गाबाट झारेँ । ए ! वसपार्क नै आइपुगिएको रहेछ, छेउमा टिकट काउन्टर रहेछ ‘अमर ज्योती ट्राभल्स’ को । टाङ्गावाला ले नै भन्यो, “साब को एक टिकेट नाइटबस की पट्ना के लिए” । काउन्टरमा बस्ने बुढाले ‘डेढ सौ’ भन्यो । मैले ‘पैसो निकालेर दिँए, काउन्टरको बुढाले टिकट दियो’ । टिकटमा लेखिएको थियो, ‘ए पी घिमिरे, रक्सौल टु पट्ना, सिट १८, समय ८:२० पिएम’ । टाङ्गावाला को हिसाव नि फर्स्याएँ, उ फर्कियो ।
मेरो हातमा ‘रक्सौल देखी पटना’ जाने नाइटबस को टिकट थियो । म ढुक्क भएँ, अब पटना त पुगिने भइयो । काउन्टर छेउ कै होटल को कुर्सी तानेर बसेँ । बोर्डरबाट यस्तै २-३ किलोमिटर भित्र हुनुपर्छ त्यो ठाउँ, तर किन हो किन कस्तो विरानो लाग्यो । कोही चिनेको छैन, सबै काला काला वर्ण का छन् । उनीहरु कि त भोजपुरी कि त हिन्दी मा बात मारिरहेकाछन् । बुझ्न त म उनिहरुले बोलेको सबै बुझ्थेँ तर बोल्न त समस्या नै छ । काउन्टरमा टिकट काटेर केही नेपालीहरु पनि बसिरहेका रहेछन् । तर मैले उनीहरु सँग कुनै कुरा गरिन, उनीहरु आफु-आफू नै गफ गरेर बसेका थिए, आउनेहरुलाई कहाँ सम्म हो तपाई भन्थे । कालो कालो देखेर सायद उनीहरुले मलाई पनि बिहारी नै सोचे, उनीहरुले मलाई भने केही सोधेनन्, र मैले पनि केही सोध्न आवश्यक ठानिन । कुरा सुन्दा उनीहरुलाई त्यता तिर को बाटो को सबै ज्ञान थियो, तर आफूलाई त कुन ठाउँ कता छ, केही पत्तो छैन । मात्र थाहा थियो, पट्ना जानु छु, टिकट लिइसकेको छ । न आफूले कहिले रेल देखेको छ, न चढेको छ, न प्लेटफार्म र स्टेशन कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ, न चिनेका कोही साथीहरुनै छन् । आफूसँग पट्ना बाट बेङ्गलोर को लागि रेल को टिकट भने थियो ।
बिहारी र बिहार भनेपछि खासै राम्रो सोचिदैन थियो तर उनीहरु को व्यवहार मलाई राम्रो लाग्यो र नेपाल को भन्दा विलकुल फरक पाएँ । उनीहरुको बस को टिकट बुकिङ काउन्टर मा कुनै किसिम को भिडभाड थिएन । उनीहरु आएका यात्रुहरुलाई बस्न नजिकै को घर देखाइरहेका थिए, जहाँ उनीहरुले सोफा, कुर्सी र खाट राखेका थिए । वहाँ जाइए, ब्याग रखिए, आराम किजिए भन्थे । मलाई उनीहरुको त्यही कुरा ले प्रभावित बनाइरहेको थियो, अत: केही अघिसम्म छाएको निराशा केही हट्दै गइरहेको थियो अनि दिन को १ बज्दै थियो । मैले अरु ७-८ घन्टा धुम्धुम्ति बसेर बिताउनु पर्ने थियो ।
मोबाइल को सिम लिनुपर्यो भन्ने सोचेँ । बसपार्क छेवै को किराना मा एयरटेल को बोर्ड झून्डिएको रहेछ । ‘यहाँ सिम मिल्ता है क्या?” मैले सोधेँ । उसले ‘मिल्ता हे’ भन्यो । ‘सिम लेने के लिए क्या चाहिए’ मैले सोधेँ, उसले जवाफ दियो ‘आपका आइडि का फोटोकपी और आपकी फोटो’ । ल म फोटोकपी गरेर आउँछु भने । अनि म फोटोकपी गर्ने र घरमा पनि नाइटबस को टिकट लिइसकेको कुरा जानकारी गराउन भनेर रक्सौल बजार हुँदै बोर्डर छेउ मा आएँ । तातो घाम, अनि गह्रुङ्गो झोला बोक्दै ‘भारितय कस्टम’ सम्म आइपुगेँ । बोडर छेउमा पुग्दा मोबाइलमा सिग्नल देखिएको कारण घरमा फोन गरेँ, अनि ट्विटर मा नि ट्विट गरेँ, बेलुका ८:२० बजे रक्सौल छाड्दैछु भनेर ।
छेउकै पसलमा आफ्नो नागरिकता को फोटोकपी गरेँ । अनि मोबाइल कम्पनी को बोर्ड कुन पसल मा देखिन्छ भन्दै हेर्दै हिँडे । अलि अघि बढेपछि एउटा मोबाइल पसलमा छिरेँ, त्यहाँ सबैभन्दा सस्तो रिलायन्स को सिम पाइदोँरै’छ ४० रुपैयाँमा । मलाई सिम चाहियो भने, उसले भन्यो ‘आपका आइडी का फोटोकपी चाहिए’ । मैले हत्त न पत्त आफ्नो नागरिकता को फोटोकपी झिकेर दिएँ । उसले एकछिन हेर्यो र सोध्यो ‘ये क्या है?’ । मैले भने ‘सिटिजनसिप, मे नेपाल से आया हुँ और मुझे सिमकार्ड चाहिए’ । उ हाँस्यो र भन्यो ‘आप सिम नहिँ ले सक्ते, सिम लेने का लिए भोटर आइडि चाहिए’ । मैले भनेँ, ‘अरे भाइसाहव मुझे बेङ्लोर तक जाना हे, मुझे सिम भि चाहिए’ । उसले भन्यो, ‘आपको बेङ्लोर मे सिम मिल सक्ता हे, पर ये बिहार की बोर्डर इलाका पे सिम नहिँ मिल्ता’ । मैले फेरि सोधेँ, ‘पटना मे मिल्ता हे क्या?’ । उसले भन्यो ‘नहिँ’ । मैले उसलाई ‘धन्यवाद’ भनेर त्यहाँबाट हिँडे ।
घाम का कारण टाउको फुट्ला झैँ गरि तातेको थियो, रुमाल ले टाउको र अनुहार छोप्दै हिँडिरहेको थिँए । बाटो मा लिच्ची देखेपछि मन थाम्न सकिएन । १० रुपैयाँ को १० वटा लिच्ची किनेँ, अनि लिच्ची टोक्दै बस काउन्टर रहेको बसपार्क तिर लागेँ । काउन्टर मा पुग्दा अघि देखी बसिरहेका नेपालीहरु कोही काउन्टर मा थिएनन्, उनीहरु को दिउँसो को बस रहेछ । म एक्लै गएर काउन्टर मा थ्याच्च बसेँ । एउटा बस हिँड्नै लागेको थियो, काउन्टरमा अर्को बुढा आएर सोध्यो, ‘आप को नहिँ जाना हे?’ । ‘नहिँ मेरे शामके बस है’, मैले भनेँ । उसले भन्यो ‘अच्छा नाइटबस’ । मैले टाउको हल्लाएँ । उसले नजिकै को घरमा गएर आराम गर्न सुल्झायो । म त्यतै लागेँ अनि कुर्सीमा झोला राखेर, सोफामा लम्पसार परेँ ।